သင့် Android ၏ privacy ကိုထိန်းချုပ်ရန် App Lock | Androidsis
privacy နဲ့ပတ်သက်ရင် Android ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ချင်ပါသလား။ အကယ်၍ အဖြေသည်အလွန်များနေပါကယနေ့ထောက်ခံချက်ကိုသင်လက်လွတ်။ မရသင့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဆိပ်ကမ်းများ၏ privacy ကိုထိန်းချုပ်ရန်အကောင်းဆုံး app များထဲမှတစ်ခု.
လူအများသိထားတဲ့ application အဟောင်းတစ်ခုအား feature အသစ်များထည့်သွင်းထားသည်။ သင်၏ Android လက်ဗွေလုံခြုံရေးကိုထောက်ပံ့သည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ပေးစရာမလိုပဲ၊ ကိရိယာမန်နေဂျာအတွက် pin ရန်မလိုအပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်၏လက်ဗွေရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမဆုံးရှုံးရန်။
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကဒီအပလီကေးရှင်းကနာမကိုအမှီပြုတယ် AppLock သော့ခတ်, ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်အခမဲ့ကြော်ငြာများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကြော်ငြာများနှင့်အတွင်း ၀ ယ်ယူမှုများရွေးချယ်နိုင်သည်။ ငါလျှောက်လွှာထဲကအများဆုံးရဖို့ဝယ်ယူမှုကိုမဆိုဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး.
0.1 ဤလင့်ခ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် AppLock Lock ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
1 AppLock ပုံပြခန်း
ဤလင့်ခ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် AppLock Lock ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
AppLock မှကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအဓိကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည်အခြားအရာများဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲအသုံးပြုခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်ထည့်သွင်းထားသော application များသို့သော့ခလောက်ထည့်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal သည်သော့ဖွင့်ပြီးအလုပ်လုပ်နေသော်လည်း
ပုံမှန်သော့ဖွင့်ခြင်းပုံစံသို့မဟုတ်စကားဝှက်အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအပြင်ဤသော့ခတ်အမျိုးအစား၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့ Android terminal ၏ချိန်ညှိချက်များတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ fingerprint ၏ပုံမှန်ပြင်ဆင်မှုကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည် iota လုံခြုံရေးဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြီးမားသောနှစ်သိမ့်မှုပေးသောကြောင့်၎င်းသည်တိုးတက်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းထားသောမည်သည့် application ကိုမဆိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်းအပြင် ဒေတာဆက်သွယ်မှုများ၊ ဘလူးတုနှင့်ဝိုင်ဖိုင်တို့ကို activation ပိတ်ခြင်းကဲ့သို့သောစနစ်အသုံးချပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပင်၎င်းတွင် Play Store မှတရားဝင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ apk ဖိုင်ကို download လုပ်ခြင်းဖြင့်ပြင်ပ၌ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်တွင်ထည့်သွင်းထားသောမည်သည့် application သစ်ကိုမဆိုအလိုအလျောက်ပိတ်ဆို့ရန်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒီဟာမလုံလောက်သေးဘူးလို့ထင်ရသလို၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသီးသန့်သိမ်းဆည်းရန်သိမ်းဆည်းခြင်းကဲ့သို့သောလုံခြုံရေးကိရိယာများ နှင့်လျှောက်လွှာ၏ကိုယ်ပိုင် Vault option ကိုမှသာသုံးပါ။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ unlock ပုံစံနှင့်စကားဝှက်ကိုသော့ဖွင့်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိုရယူရန်ကြိုးစားခဲ့သောသူစိမ်းများ၏ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအခါသူကပါဝါကဲ့သို့အဆင်ပြေရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှု profile များကိုဖန်တီးပါအထက်ဖော်ပြပါပရိုဖိုင်းကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်ဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ဆို့ခြင်းခံလိုသော application များအားအခြေအနေအရခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သောရွေးချယ်စရာလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ထားသောဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်ပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏တည်နေရာနှင့်အညီပရိုဖိုင်းများကိုဖွင့်ပါ။
ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးကော်ဖီဆိုင်၏အများပြည်သူသုံးကွန်ယက်တစ်ခုကိုဆက်သွယ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုရွေးချယ်စရာကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ သို့မှသာထိုသီးသန့်ဝိုင်ဖိုင်နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ application application အားလုံးမှကျွန်ုပ်တို့ configured လုပ်ထားသော applications များအားလုံးကိုလုံခြုံရေးအများဆုံးပိတ်ထားသည်.
သို့သော်ဤရွေးချယ်စရာများ (သို့) လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးသည်အနည်းငယ်သာသိသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်းရှိသည် Incognito browser ကိုဒီ app ထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏မူလလူမှုရေးကွန်ယက်များဖြစ်သောတွစ်တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ ဂူဂဲလ် + နှင့်လင်ကင်ဒီနင်တို့ကိုမူလအသုံးချပရိုဂရမ်များထည့်သွင်းစရာမလိုပဲလုံခြုံစွာဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနှင့်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့တူ အခင်းအကျင်း (သို့) အရေခွံကိုအခမဲ့ရယူပါ လျှောက်လွှာကိုမတူညီသောထိတွေ့မှုပေးရန်နှင့်ရက်အနည်းငယ်အကြာစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ပြီးနောက်ငါနိဂုံးချုပ်သည် AppLock သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဆိပ်ကမ်းများ၏ privacy ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏လက်ဗွေသော့ခတ်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလက်မလျှော့ဘဲ။
ဤနေရာတွင် App Lock ကိုရယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏ Android လုံခြုံရေးကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသော App တစ်ခုဖြစ်သည်